ပီနန်း ဘာတာ ၀ပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး အသတ်ခံထားရတဲ့ အလောင်း တွေ့ရှိFree Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
» ပီနန်း ဘာတာ ၀ပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး အသတ်ခံထားရတဲ့ အလောင်း တွေ့ရှိ
ပီနန်း ဘာတာ ၀ပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး အသတ်ခံထားရတဲ့ အလောင်း တွေ့ရှိ
Written By နေဇော် လင်း on Wednesday, July 9, 2014 | 10:44:00 PM
ဘာတာဝပ် Perai တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး အသတ်ခံရတဲ့ အလောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီ သေဆုံး သူ၏ နေထိုင်ရာ နေအိမ် အနောက် ဘက်တွင် အသတ်ခံရသည်ဟု ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့က ဘားနားမား သတင်း စာမျက်နှာတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ အသတ်ခံရသူ အောင်ခင်မှာ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီ သူရဲ့ နောက်ကျောတွင် ချွန်းထက်အရာ တခုနဲ့ ထိုးနှက်ခံရပြီ ညာဘက်လက်တွင် လက်ကောက်ဝတ်အထိ ခုတ်ထစ် ခံထားရသည်။ အဆိုပါ နေရပ်တွင် နေထိုင် သူများက ဇူလိုင် ၈ နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်အချိန်တွင် Jalan Baru ရှိ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီနောက် နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကြောင်းကြား အသိပေးခဲ့ကြသည်။
နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရောက်ရှိလာပြီ သေဆုံးနေတဲ့ နေရာတ၀ိုက်တွင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီနောက် သွေးစွန်းကျန်ရစ်နေတဲ့ ဓားရှည် တစ်ချောင်း၊ ဓားမြှောင်နှစ်လက်၊ ချွန်ထက်တဲ့ လက်နက်တခုနှင့် မိုဘိုင်း ဖုန်း ၂ လုံးတို့ကို အသတ်ခံရသူ၏ အလောင်းနှင့် မနီး မဝေးနေရာတွင် တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်သည်။ Seberang Perai Tengah နယ်မြေခံ အရာရှိ ACP Rusli Mohd Noorက ပြန်ပြောဆိုရာတွင် စစ်ဆေး မှု တွေ့ရှိချက်အရ အောင်ခင် မသေဆုံးခင် ၁၀ မီတာအထိ ဒရွတ်တိုက် အဆွဲခံထားရကြောင်း အရာရှိက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ ဓားရှည်တစ်ချောင်းက အသတ်ခံရတဲ့သူရဲ့ အလောင်းနဲ့ မီတာ ၅၀ လောက် ဝေးတဲ့နေရာတွင် အလောင်း၏အရှေ့မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်သည်။ မြန်မာ ၂ ဦးက ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ပြန်ပြောဆိုရာတွင် ၎င်းတို့ရဲ့ အိမ်ပြင်ဘက်တွင် ဆူဆူညံညံ အော်ဟစ်သံ ကြားလိုက်ရပြီ ခဏနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်လာအချိန်တွင် လူတစ်ယောက် အသတ်ခံရသည်ကို သိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲအရာရှိက သတင်းထောက်တွေကို ဖြည့်စွတ် ဖြေဆိုသွားခဲ့သည်။
ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီ အမြန်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်သူများကို နီးစပ်ရာ ရဲဌာနများသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရန် ရဲအရာရှိ ရုစလီက တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ Myanmar Found Stabbed To Death In Perai
BUTTERWORTH, July 8 (Bernama) -- A Myanmar was found dead withastab wound and his right hand almost severed at the rear ofahouse in Perai here early today.
A resident stumbled on the body in Jalan Baru about 1.10am before the police were alerted. A police team foundablood-stained machete, two knives,asharp weapon and two mobile phones, not far from the victim's body.
"A blood-stained machete, believed to have been used in the attack, was found inasecondary undergrowth about 50 metres from the body," he said.
Rusli urged those with information on the murder to contact the nearest police station to facilitate investigations. မူရင်း - သတင်း - သူရိယ Facebook - https://www.facebook.com/pages/Thuriya/1374489779468995
ဓာတ်ပုံ - http://www.bernama.com.my/bernama/v7/ge/newsgeneral.php?id=1052181 နေဇော်လင်း Free Online Radio Media (Malaysia News) Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com Free Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin17